Maxaa ka jira in GEELLE uu ku biiray isbahaysiga sedex Geesoodka ee G/Afrika? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa ka jira in GEELLE uu ku biiray isbahaysiga sedex Geesoodka ee...
Maxaa ka jira in GEELLE uu ku biiray isbahaysiga sedex Geesoodka ee G/Afrika?
Jabuuti (Caasimada Online) – Warar aan la xaqiijin oo la isla dhex marayo ayaa sheegaya in Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu ku biiray dabaylaha ka socda gobalka Geeska Afrika ee salka ku haya kulamada dhex maray Madaxweynayaasha Soomaaliya, Ereteriya iyo Raysalwasaaraha Itoobiya.
Raysal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed, oo isagu wada isbedelka ka socda Geeska Afrika, ayaa magaalada Addis Ababa kulan kula yeeshay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo ay ka wada qayb galeen shirkii Madaxda Afrika.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa raysal wasaaraha Itoobiya ka codsaday inuu u hawlgalo sidii loo xalin lahaa colaadda Ereteriya iyo Djibouti oo aan weli si rasmi ah loo dhammayn.
Waxa ay warbaahinta Itoobiya baahisay sawir ay wada socdaan Madaxweyne Geele iyo Raysal wasaare Dr. Abiy Axmed oo labaduba dhoola cadaynaya. Balse dadka siyaasadda diblomaasiyadda falanqeeya ayaa aaminsan inay weli kala durugsanyihiin Djibouti iyo dalalka Gobalka ee ay Itoobiya hor boodayso.
Contact us: [email protected] caa[email protected]